3 xeelado si guriga looga dhigo mid ura | Bezzia
3 xeelado si guriga looga dhigo mid fiican
Toñy Torres | 11/09/2021 16:00 | Guriga
Udgoonka guriga oo wanaagsan ayaa lagama maarmaan u ah in lagu raaxeysto jawi nadiif ah oo soo dhaweyn leh. Si taas loo gaaro, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo nadaafadda iyo nadaafadda qol kasta oo gurigaaga ah. Laakiin nadiifinta kaliya kuma filna, maadaama mararka qaarkood ay ka go'an tahay khaladaad aan oggolayn in guriga si buuxda loo nadiifiyo. Si had iyo jeer guriga looga dhigo mid ura, waxaad raaci kartaa xeelado.
Mana aha wax ku saabsan daboolidda ur xun oo leh hawo cusub ama barafuun macmal ah. Furaha ayaa ah nadaafadda, hawo -maalmeedka guriga iyo faahfaahinta inta badan la iska indho -tiro, habka nadaafadda. Haddii aad rabto inaad guriga ka dhigto mid fiican, waxaan kuu sheegi doonaa qaar ka mid ah isla markiiba talooyin si loogu gaaro si sahlan, fudud oo waara.
1 In guriga udgoon uu ku bilaabmo hawo fiican
1.1 Alaabta nadiifinta iyo nadiifinta guriga
1.2 Xeelado lagu urinayo ur wanaagsan guriga
In guriga udgoon uu ku bilaabmo hawo fiican
Ku soo noqoshada guriga ka dib maalin dheer oo shaqo ah waa waxa loo baahan yahay si loo helo nasasho habboon. Laakiin haddii uusan gurigu nadiif ahayn, ur fiican ma jiro ama uu jiro urur xun, way ka sii dhib badan tahay in lagu raaxeysto xaaladda wanaagga ee ay tahay in guri bixiyo. Hawo fiican ayaa fure u ah in guriga laga dhigo mid ura mana aha qasab in daaqadaha la furo maalinta oo dhan.
Daaqadaha oo la furo 15 ilaa 20 daqiiqo subaxdii ayaa ku filan. Fur sariirta si aad u huwato xaashida ka hor intaadan sariirta samayn. Raadi tamar si aad u gaarto hawo -mareenka, tani waxay noqon doontaa mid aad waxtar u leh. Tilmaantan fudud ee maalinlaha ah waxaad awoodi doontaa inaad ka saarto urta xun qolalka.
Alaabta nadiifinta iyo nadiifinta guriga
Ma jirto wax faa'ido ah inaad saacadaha nadiifinta ku qaadato haddii aadan waqti ku bixin nadaafadda qalabka nadiifinta. Suufka iyo marada jikada, marada, xaaqinka ama weelal kasta oo inta badan loo isticmaalo nadiifinta. Dhammaan qalabkani wuxuu hayaa haraaga iyo hadhaaga haddii aan la nadiifinWaxa kale oo ay soo saaraan ur xun, bakteeriya, fangas iyo jeermis -dileyaal waxyeello u leh caafimaadka.
Si aad tan uga fogaato, waa inaad nadiifi dhammaan maacuunta wax lagu nadiifiyo si joogto ah, haddii ay suurtogal tahay isticmaalka kasta ka dib. Markaa markay tahay inaad dib u isticmaasho alaabtaas si aad u nadiifiso, waxaad yeelan doontaa iyaga oo ku jira xaalad kaamil ah si aad guriga uga tagto nadiif oo aan lahayn ur xun. Xaaq wasakh ah, maro leh hadhaaga cuntada ama xaaqin leh haraaga sagxadda, waxay u adeegtaa uun inay wasakhda sii qaybiso. Ka fogow shaqada laba -laabka leh kaliya alaabtaada nadiifinta mar walba diyaarso.
Xeelado lagu urinayo ur wanaagsan guriga
Ka sokow hawo -qaadista maalinlaha ah iyo nadiifinta, waxaad isticmaali kartaa xoogaa xeelado ah si aad gurigaaga uga dhigto mid mar walba urta. Haa runtii, iska ilaali kiimikada leh urta beenta ah maxaa yeelay waxaad awoodi doontaa oo kaliya inaad qariso oo aadan baabi'in sababta keentay urta xun. Halkii waxaad isku dayi kartaa mid ka mid ah xeeladahaan:
Diyaarso weel buufiyo oo biyo ku qas jilciye maro. Maalin kasta ka hor intaadan sariirta sameyn, ku buufi xaashida isku darka si sariirta mar walba u likeirto sidii mar dhow la dhaqay.
Xirmooyinka dharka leh ubaxyo qalalan. Lavender waa kaamil inkastoo aad sidoo kale isticmaali karto potpourri iyo dhowr dhibcood oo udugga aad ugu jeceshahay. Ku rid baakadaha marada udgoon gudaha armaajooyinka, inta u dhaxaysa gogosha nadiifta ah iyo xitaa geesaha gurigaaga sida albaabka laga soo galo gurigaaga.
Bicarbonate ee unugyada. Roogga iyo maryaha qaro weyn sida kuwa kursi -fadhiga way adag tahay in la maydho waxayna u muuqdaan inay uruursadaan wasakh badan, oo dhalisa ur xun. Toddobaadkiiba mar, ku buufiso soodhaha qalalan roogga iyo fadhiga. Subaxda xigta waa inaad vacuum iyo bicarbonate waxay kaa qaadi doontaa urta xun.
Dhammaan talooyinkan ayaa kaa caawin doona inaad guriga ka dhigto mid aan lahayn ur. Laakiin waxaad sidoo kale isticmaali kartaa xalalka sidoo kale ah kuwa la isku qurxiyo, sida shumacyada udugga leh, gubidda udugga ama ubaxyada la qalajiyey. Tilmaamo yaryar waxaad ku heli doontaa guri soo dhaweyn leh oo aad ku nasan karto kuna raaxaysan karto macbudkaaga nabadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » 3 xeelado si guriga looga dhigo mid fiican
Sidaad iskaga ilaalin lahayd nabarro cagahaaga ku jira markaad ordeyso
Faytamiin B3: Faa'iidooyinkiisa, cuntadiisa iyo qaar kaloo badan